Kooxda Barcelona Oo U Dhaqaaqday Badalka Xidiga Kylian Mbappe Oo Ay Ku Fashilantay
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Kooxda Barcelona oo u dhaqaaqday badalka xidiga Kylian Mbappe oo ay ku...
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa iska lumisay fursad qaali ah oo ay qiime jaban kula soo saxeexan karayeen weeraryahanka reer France ee Kylian Mbappe, waxaanay ka door bideen laacibka ay isku waddanka yihiin ee Ousmane Dembel.
Kylian Mbappe ayaa Barcelona u noqon lahaa beddelka Neymar iyagoo kasoo bixinayay lacag raqiis ah marka loo eego qiimaha uu taagnaa, sida uu sheegay Agaasimihii hore ee Barcelona kooxda ee Javier Bordas.
Barcelona ayay qasnaddeeda ku dhacday lacag dhamayd 222 milyan oo Euro xagaagii 2017kii kaddib markii ay PSG lacagtaas ka bixisay Neymar Jr, waxaanay kooxdu markiiba u dhaqaaqday sidii ay beddelkiisa u heli lahayd iyadoo kala dooratay ciyaartooyo dhawr ah oo ay ka eegayeen saamayntooda iyo sida ay mustaqbalka u noqon karayaan kuwo buuxiya booska uu ka baxay xiddiga reer Brazil.
Barca ayaa baadhitaan ku samaysay taatikada iyo farsamada ciyaareed ee Mbappe oo ay kooxda reer France ee Monaco waqtigaas doonayaysay inay ka hor joogsato PSG, taas beddelkeedana u bandhigtay Barcelona inay kaliya kula wareegaan 100 milyan oo Euro oo xataa ka hoosaysa kala-badh qiimaha ay PSG kula wareegtay markii dambe.
Laakiin Robert Fernandes oo ahaa xoghayihii farsamada ee Barcelona ayaa doortay inay kooxdu lasoo saxeexato Ousmane Dembele oo aad uga qaalisanaa Mbappe.
Bordas oo waraysi siiyey wargeyska Mundo Deportivo oo arrintan ka hadlay ayaa yidhi: “Markii aanu la saxeexanaynay Dembele, wakiil Josep Maria Minguella ayaa isoo wacay iina sheegay in Mbappe la heli karayo. Waxaan la hadlay Josep Maria Bartomeu oo aan u sheegay sida uu iila muuqdo.
“Waxaan telefoonka kala hadlay aabbaha dhalay Mbappe, waxaanu ii sheegay in aanay doonayn inay tagaan Real Madrid, sababtoo ah Cristiano Ronaldo, Karim Benzema iyo Gareth Bale ayaa joogay, taas beddelkeedana waxa uu ii xaqiijiyey inuu iman karayo Barca sababtoo ah bixitaanka Neymar.
“Madaxweynaha Monaco waxa uu doorbidayay inuu Mbappe u saxeexo Barcelona oo aanu isku xoojinin PSG oo tartan toos ahi ka dhaxeeyo. Waxa uu heshiisku ku dhamaan karayay 100 milyan oo Euro amaba £90 Gini.
“Robert ayaa doorbiday Dembele, Pep Segura na wuu ku taageeray. Sharraxaaddoodu waxay ahayd in Mbappe uu kalidii ciyaaro balse Dembele uu ciyaartoyda kooxda la ciyaaro. Sidoo kale, maadaama uu Neymar oo garabka ahaa baxay, Robert waxa uu door bidayay garab kale marka loo eego ciyaartoy dhaliye ah.”
Barcelona ayaa qaadatay go’aanka ah inay Ousmane Dembele lasoo saxeexdaan, waxaanay kasoo bixiyeen lacag dhan €105 milyan oo Euro oo kaash ahaa iyo sidoo kale €40 milyan oo kale oo heshiiska ku jiray oo gunnooyin ah.
Laacibkan reer France ayaa isla markii uu Camp Nou yimid waxa uu galay dhaawac iyadoo illaa haddana uu kaliya u saftay 82 ciyaarood oo uu u dhaliyey 22 gool iyo 17 caawimood, taas oo ah khasaare weyn marka loo eego ciyaartoy ku jooga €145 milyan oo Gini.
Previous articleCiyaaraha Live ka ah
Next articleKooxda Liverpool oo Ruben Semedo ku soo dartay Daafacyada ay Suuqa ka dooneyso